China AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Oil Cartridge Lead Free and No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor factory na ndị na-emepụta | Akwụkwọ vaịn Alphagreen
AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 Oil Cartridge Lead Free and No Heavy Metal with Pure Taste and Big Vapor
Short Description ： Anyị na-enye AT01 Easy Press Vape CBD / THC / Delta 8 disposable vape katrij. O bu uto di ocha na vapooro ibu. Anyị nwere a ọkachamara R&D otu na ezi tupu saling, mgbe-saling ọrụ. Ngwaahịa anyị nwere ezigbo nzaghachi na ogo dị elu. Ọ bụ iwu na ogo bụ ndụ. Na-atụ anya ịkwado gị.
FOB Ahịa: US $ 0.78 - 0.88 / Ibe
1. Product Okwu Mmalite nke AT01 CBD / THC Vape katrij
Easy pịa AT01 bụ otu ihe owuwu dị ka anyị mbụ katrij AT01, ma ọ bụ nweta nkwalite tụnyere AT01. N'ihi na ọ bụ dị iche iche n'ọnụ-Easy Press Cap. Cartridges AT01 nwere okpu gbagọrọ agbagọ ma ọ dị mkpa idozi ọrụ iji mechie ọnụ. AT01 Easy Press katrij bụ na pịa okpu, wee chekwaa ọrụ gị na oge. Ọ bụ ihe adaba na mfe.
Ntuziaka bụ nke ndabara ma ọ bụ isi awọ site na ndabara. Mana enwere ike ịhazi agba ndị ọzọ na MOQ nke 3,000. Anyị na-akwado logo ebi akwụkwọ na nkwakọ imewe.
Karịsịa, AT01 mfe pịa katrij bụ obere leakage ọnụego. Ọ pịa n'ụzọ dị mfe mana enweghị ike imeghe ọzọ. Ya mere, ị naghị echegbu onwe gị banyere ihifu na ịfu mmanụ gị.
2. Oke oke ngwaahịa (Nkọwapụta) nke AT01 CBD / THC Vape katrij
CBD / THC vape katrij / Easy Pịa AT01
4 * 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm （Omenala Size）
3. Njirimara Ngwaahịa na Ngwa nke AT01 CBD / THC Vape katrij
—— Easy Press NDipMỌD,, pịa aka kama iji igwe.
4. Production Nkọwa nke AT01 CBD / THC Vape katrij
Glass Kpamkpam iko n'ọnụ, ọ dịghị plastic. Lekwasị anya na ahụike gị
② Pịa na ụdị, n'ihi na ọ dịghị eri eri imewe.
Enweghị ọkwa dị elu dị arọ (Ọ bụrụ na ịchọrọ ịma ihe ọghọm nke ọla dị arọ, biko gụọ isiokwu dị n'okpuru), ndụmọdụ dị iche iche maka ịhọrọ.
④ High mmanụ absorption ọnụego, uwe dị iche iche ọkpụrụkpụ mmanụ.
⑤ Omenala logo obibi na dị iche iche n'ọnụ agba, na-eme gị onwe gị na ika.
Kedu ihe mbibi nke ọla dị arọ nye mmadụ?
Kpachara anya banyere ọla dị arọ nke nwere ike ibute kansa
Na akụkọ, anyị nwere ike ịhụ na ọtụtụ ọla nwere ike ibute ụfọdụ ahụ mmadụ, ọkachasị mmetọ nke ọla dị arọ na gburugburu ebe obibi, nke nwere ike ime ka ndị mmadụ daa ọrịa na ọbụnadị kpatara kansa. Ngwongwo ndị dị arọ dịkwa ebe niile na ndụ, ọ bụghị naanị mmetọ gburugburu ebe obibi, ọbụnadị ihe ịchọ mma nke ndị enyi nwanyị ji nwere ọla dị arọ. O doro anya na nsogbu ya n’ahụ mmadụ zoro ezo nke ukwuu, ọ dịghị mfe ịchọpụta ya, na e nwere ọtụtụ ụdị ọla dị arọ, na mmerụ ahụ dị iche iche dị iche iche dị arọ na ahụ mmadụ dịkwa iche. Mgbe ahụ ka anyị soro mmadụ niile gaa lee ihe ọghọm nke ọla dị arọ
Ebute ụzọ, ndu bụ otu n'ime ihe ndị kacha egbu egbu na-emetọ mmetọ dị arọ. Ozugbo ọ banyere n’ahụ́ mmadụ, ọ ga-ebibi mkpụrụ ndụ ụbụrụ mmadụ nke ọma, na-akpata ịda mbà n’obi nke ọrịa kansa, na-eme ka ụbụrụ ghara ịnwụ na mgbaka ndị agadi, ọbụnakwa nwee ọrịa kansa. .
Ebere, na-erepịa Mercury na-abanye imeju ozugbo, ma mebie ọhụụ na akwara ụbụrụ. Mmiri nwere ọtụtụ Mercury dị na mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ọ dochie anya mmiri nwere Mercury maka ogologo oge, ọ ga-ebute nsị na-adịghị ala ala.
Chromium, mmerụ kachasị dị na ya bụ ịkpata ọrịa uche na nhịahụ nke aka na ụkwụ.
Arsenic, metal a dị arọ nwere ike ibute pigmenti anụ ahụ na adịghị mma keratinization.
Aldehydes nwere ike ibute ọrịa akụrụ na akwara obi na ọrịa cerebrovascular. Ihe egwu kachasị dị mkpa bụ ọbara mgbali elu.
Cobalt nwere ike ime ka redioaktivu mebie akpukpọ ahụ.
Vanadium, nke nwere mmetụta ụfọdụ na obi mmadụ na ngụgụ mmadụ, nwere ike ibute adịghị mma nke plasma metabolism.
Mgbapu, dị ka cobalt, nwere mbibi redioactive na akpụkpọ.
Selenium, ndị mmadụ buru oke ibu na selenium na-arịa ajọ ọrịa.
Thallium nwere ike ime ka otutu neuropathy.
Manganese nwere ike imetụta ọrụ nke thyroid, ọ dịkwa mfe ịnweta hyperthyroidism.
Gbamgbam, dị ka opu, na-egbu egbu nke ukwuu ma nwee ike ibute kansa.
Ekwenyere m na onye ọ bụla nwere nghọta ụfọdụ banyere ihe egwu nke ọtụtụ ọla. Nnukwu ọla na-emebi ihe n’ahụ mmadụ. Mmetụta kachasị njọ bụ na ha nwere ike ibute ọrịa kansa ma tinye ndụ mmadụ n'ihe egwu. Yabụ, anyị ga - ebute mmetọ dị ukwuu na ndụ anyị, ọkachasị mmetọ igwe na gburugburu ebe obibi, nke nwere ike ime ka ọla ndị a dị arọ banye na ala na mmiri. Mgbe ndị mmadụ batara na mmiri na ala a rụrụ arụ, ọ ga - ebute nsị na - adịghị ala ala, nke ga - ebute nsogbu ụfọdụ na ahụ. Ọrịa na-eyi ndụ egwu.
Nke gara aga: AIR Button ebighị Kemeghi Voltaji Nkwụ Batrị na 510 Eriri, Ohere maka Universal CBD / THC / Delta 8 510 Cartridge
Osote: AT01 Vape CBD / THC / Delta 8 Katrij, Ọ dịghị Arọ Metal Lead Free na Dị Ọcha Ire na Nnukwu Alụlụụ
cbd vape katrij
seramiiki cbd katrij
efu vape katrij
Refillable cbd mmanụ katrij
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, 510 batrị, batrị vape pen, mkpofu vape pen, pen na-akwụ ụgwọ vape pen, cbd mkpịsị penpe, cbd mmanụ vape disposable, Ngwa niile